Horey ayaan ula soo kulmay tan: Samsung waxay soo saari doontaa midab madow oo dhalaalaya Galaxy S7 | Wararka IPhone
Horey ayaan ula soo kulmay tan: Samsung waxay soo bandhigi doontaa madow dhalaalaya Galaxy S7
Sida bir madaxayga ah oo aan ahay, markii aan maqlay warkan, kooxihii heesta Birta Birta ee oranaya "Dareemo sidii aan hore u joogay oo kale" ayaa maskaxdayda ku soo dhacday: sida laga soo xigtay macluumaadka laga soo xigtay The Korea Herald, Samsung waxay qorsheyneysaa inay soo saarto Galaxy S7 midab cusub. Qiyaas midkee? Haa, Diyaaradda Madaw ama madow dhalaalaya in, dhibaatooyinka calaamadaha dhinac, dadka isticmaala aad ayey u jecel yihiin.
Xaqiiqdu waxay tahay in, sida weyn ee reer Kuuriya uu horeba u yidhi munaasibad, Samsung waxay muddo dheer soo saaraysay taleefannada, waqtigaas oo ay soo saartay aalado midabbo leh oo aan qiyaasi karno. Dhibaatada sheegashadani waa taas dib ugu noqday xirashada dahabka iyo kor u kaca dahab ka dib markii Apple sii daayay midabadaas on iPhone 5s ee 2013 iyo iPhone 6s ee 2015, taas oo macnaheedu noqon karo oo keliya inay isha ku hayaan dhinac kasta wax kasta oo Apple ku sameyso taleefannadeeda casriga ah.
Madow dhalaalaya Galaxy S7 wuxuu ku biirayaa matte isku midab ah
Sannadkan guuritaankiisu wuxuu u eg yahay mid macno badan samaynaya waana laga fahmi karaa sanadihii hore. Sannadka 2016-ka ayaa ahaa sanadkii la soo saaray Note 7-ka dhibaatada caanka ah ee bateriyadeeda, sidaa darteed Samsung waxay sameyneysaa wax kasta oo ay ku heli karto dareenka dadka isticmaala si ay u iibsadaan calankeeda oo aan wax dhibaato ah siinaynin. Hadday taasi ka dhigan tahay ku billow nooc midab leh oo caddeeyay inuu aad caan u yahayShakhsiyan uma maleynayo tan qaldan
Galaxy S7 ee aad cinwaankan cinwaan uga dhigtay waa madoowga madow ee loo yaqaan "Onyx", aalad ka dhalaal badan iPhone-ka 7-da ah. Qaabka cusub waa inuu la mid ahaadaa iPhone-ka sannadkan, kaas oo ah aad u xasuusinaysa madowgii loo adeegsaday baabuurta, in kasta oo aan weli sugi doonno inaan aragno midabka ugu dambeeya ee moodelkan cusub, haddii uu yimaado.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Horey ayaan ula soo kulmay tan: Samsung waxay soo bandhigi doontaa madow dhalaalaya Galaxy S7
Waxaan doonayay inaan wax ka faalloodo, laakiin waxaan ka baqayaa inay Samsung nuqul ka sameyso sidoo kale XDDD
EVO Banco Móvil waa la cusbooneysiiyay oo ay ku jirto hagaajinta lagama maarmaanka u ah arjiga
Smart PDF Scanner, bilaash wakhti go'an